जब भैंसीमाथि चढेर उमेदवारी दर्ता गर्न पुगे… – Butwal 24 News
जब भैंसीमाथि चढेर उमेदवारी दर्ता गर्न पुगे…
September 13, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on जब भैंसीमाथि चढेर उमेदवारी दर्ता गर्न पुगे…
काठमाडौं । भारतको बिहार राज्यको पञ्चायत चुनावका लागि एकजना भैंसीमाथि चढेर उमेदवारी दर्ता गर्न पुगेका छन् । कटिहार जिल्लाको रामपुरका आजाद आलम उर्फ गुड्डू आइतबार भैंसीमाथि चढेर उमेदवारी दर्ता लागि पुगेका हुन् ।
“म एक गोठालो हुँ । गरिब किसान हुँ । पेट्रोल, डिजेल किन्न सक्दिन । सवारीको कुनै उपाय नभएपछि भैंसीमा चढेर आएको हुँ,” उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एएनआईले लेखेको छ । उनले आफूले जितेमा किसान, मजदुर तथा गरिबका लागि काम गर्ने बताएका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने जनता र मिडिया ‘अटेन्सन’का लागि उनले भैंसी उपयोग गरेका बताएका छन् । उनी रामपुर पञ्चायको मुखिया पदका लागि उमेदवारी दर्ता गर्ने पुगेका थिए ।बिहारमा यही सेप्टेम्बर २४ देखि डिसेम्बर १२ सम्म ११ चरणमा पञ्चायत चुनाव हुँदैछ ।भैंसीमाथि चढेर आएको देखेपछि सुरक्षाकर्मीहरूले उनलाई रोकेका थिए ।
कर्मचारीले भ्रष्टाचारको आरोपबाट जोगिन २० लाख भारु जलाए
एजेन्सी, २० चैत । भारतको राजस्थानस्थित सिरोही जिल्लामा एक दम्पतीले ढोका थुनेर ग्यास चुलोमा २० लाख भारु जलाएका छन् ।पिंडवाना नगरका तहसिलदार के कल्पेश जैन र उनकी श्रीमतीले गत बुधबार घरमै २० लाख भारु जलाएका हुन् । ‘एन्टी करप्सन ब्युरो’ को टोली छापा मार्ने उद्देश्यले आफ्नो घरमा आएपछि सो दम्पतीले ढोका थुनेर ग्यास चुलोमा २० लाख रुपैयाँ जलाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
ब्यूरोको टोलीले ढोका ढकढक्याइरहँदा जैन दम्पतीले ग्यास चुलो बालेर नगद रकम जलाइरहेका थिए । ब्यूरोको टोलीले नै झ्यालबाट उक्त दृश्यको भिडियो खिचिरहेका थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरोको एउटा टोलीले पिंडवाडाकै राजस्व निरीक्षक परबत सिंहलाई एक लाख रुपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सिंहले उक्त रकम पिंडवाडाकै तहसिलदार कल्पेशकुमार जैनका लागि लिएको बताएपछि ब्युरोको टोली उनको घरमा छापा मार्न पुगेको थियो । ब्यूरोको टोलीले तहसिलदार जैनलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । उनको घरबाट टोलीले जलेको अवस्थाका नोटसमेत बरामद गरेको छ ।
सीता भण्डारी मृत्यु प्रकरण : बुटवलका डिएसपी मदन कुँवर शंकाको घेरामा तानिए
प्रशासनसँग रिसाए भिटेन,भने मेरो निजी अधिकार कहाँ गयो ?
विश्व चकित् पार्ने चिनको अर्को चमत्कार, कसरी बन्यो २८ घण्टा ४५ मिनेटमै १० तले अत्याधुनिक भवन ? (भिडियो हेर्नुस्)
हजामले कपाल बिगारिदिएपछि ३ करोड २० लाख जरिवाना
September 24, 2021 Butwal 24 News
ताप्लेजुङमा पा’सो थापेर राखिएको बन्दु’कको गो’लि लागि एक ब्यक्तीको घ’टनास्थल मै मृ’त्यु (भिडियो हेर्नुस)
डि’भो’र्सपछि स्मारिका समारीका एलिना चौहानसँग दिल खोलेर हाँसे! पल समीक्षाकाे चर्चामा एसो भन्छन (भिडियो सहित)